WAA MAXAY SABABTA AY BASASHA U NOQDAAN HURUUD IYO KALLANA, IYO WAXA LA SAMEEYO - BOW
Sababaha ah ee basasha huruudka ah iyo saaridooda
Bal qiyaas cuno adigoon basasha aysan macquul ahayn. Waxyaabahan waxtar leh ee loo isticmaalo ku dhowaad dhammaan suxuunta: marka hore, labaad, dubista, caanaha, xitaa marmalade basasha waa la diyaarinayaa.
Caleemaha huruudka ah ee cayayaanka
Waxay u egtahay in aysan jirin wax ka sahlan basasha sii kordhaya - kuwani ma aha yaanyo aan burburin ama qandaraas shisheeye oo dibadda ah. Sidaa daraadeed maxay sababta basku u noqdaan jaale ah beerta, iyo maxaad ka qabtaa? Aynu ogaano.
Basal Fly Larvae halis u ah dhammaan noocyada basasha (shinn, roodhida, caleenta). Bishii Maajo, duulimadu waxay dhigtaa ukumaha, iyo isbuuc ka dib, lafaha guluubka waxay bilaabaan inay cunaan nalalka. Warshadku marka hore waxay noqdaan huruud iyo, haddii aadan qaadan tallaabooyin, basasha ayaa dhiman doona.
Sida qiyaasta ka hortag ah, waxaa lagula talinayaa in ay ku beeraan basasha sida ugu dhaqsaha badan si ay u sii xoogaystaan ​​ka hor duullaanka dirxiga. Dooro karootada basasha ee deriska: duqsigu ma jecla urta urta.
Sida loo badbaadiyo qaanso ka soo duubista baska, haddii ay horay uugu muuqatay sariiro beerta. Bishii Maajo, markii duulimadu bilawdo ukumaha, budada dhirta leh isku dar ah: ash qoryo 200 g, boodhka tubaakada iyo basbaaska dhulka 1 tsp. (halkii mitir labajibbaaran). Ku haboon tahay in lala tacaalo maggaalada daroogada "Kreotsid PRO", xal waa in la buufiyaa dhirta.
Siyaabo kale oo looga takhaluso cayayaanka ay isticmaalaan dadka: 200 g oo cusbo ah, 10 litir oo biyo ah, dhowr ml oo ammonia ah. Xalka saline waxaa la waraabiyaa inta lagu guda jiro horumarinta baalasha (dhererka tufaaxa ah ee ku saabsan 8 cm). Waxaa lagu talinayaa in aan ku dhicin baadad, ku shub baska hoostiisa.
Waa maxay khatarta qarsoodi ah: Wuxuu cunaa caleemo, iyo dirxigiisuna wuxuu gnaw ku dhajiyaa dhammaan caleemaha. Basasha ayaa lumisa soojeedinteeda, waxay noqotaa huruud iyo dhimasho.
Si looga hortago, waxaa lagu talinayaa ka dib markii goosashada si taxadar leh u nadiifiso ciidda sariiraha, ha ka tago nalalka jiilaalka - tani waa meel ku habboon jiilaalka for the beetle.
Marka duqsigu soo baxo, samaynta dabacsanaan iyo jaridda dhirta, budada ciidda leh ash qoryo ama basbaas, shaar qallalan. Haddii ay jiraan cayayaanka oo aad u badan, daaweeyo dhirta Karbofos (60 g 10 litir oo biyo ah).
Waa muhiim! Isla markiiba ka dib markii la daaweynayo dulinyo baadiyaha kiimikada ah kiis kasta, ha cunin. Waa inay qaadataa waqti.
Waa mikroscopic (1mm) cayayaanka wuxuu xuduud u yahay ukunta midigta cagaarka cagaaran, nuugista dhammaan dheecaanka geedka iyo wehelkiisa.
Si aad uga ilaaliso iyaga, sida ka hortagga waxaad u baahan tahay ilaali dalagga beeraha, nadiifi ciidda ka dib goosashada iyo basasha geedaha ka hor intaan la beeri (ku sii wad dhalada biyaha ilaa + 45 ° C). Marka cayayaanka la arko, ku buufin leh Confidor (1 ml halkii 10 litir oo biyo ah) iyo Spark (1 kiniin ah 10 litir oo biyo ah).
Caarada basasha noloshiisu waxay burburinaysaa guluubka gebi ahaanba. Tilmaamayaasha waxay ku dul wareegaan nalalka aan la goyn sariiraha ama faafin inta lagu jiro kaydinta. Inta badan dhammaantood, xayawaankani waxay ku siman yihiin heerkulka ka sarreeya 13 ° C iyo qoyaan sare, in ka badan 60%.
Cayayaanka qaangaarka ah iyo dirxigooduba waxay bilaabaan inay cunaan basasha hoose, wax aan suurtagal ahayn in la ogaado.
Sidaa darteed, ka hortagga si wax ku ool ah ee dulin: Dhammaystirida haraaga haraaga ka dib goosashada, ha ku beerin hal goob muddo ka badan 4 sano, waraabinta alaab beerto, daawashada dhammaan xaaladaha kaydinta ee dalagga, qodidda qoto dheer ee carrada. Qalabka geedaha waxaa lagu daadin karaa jilicsan si looga ilaaliyo cayayaanka.
Nematode khatar ah sababtoo ah waa wax aan macquul aheyn in la ogaado, wuxuu degaa dhulka sannado badan. Waxaad la dagaalami kartaa adiga oo ka hortagaya dhacdadeeda.
Sida loo yaqaan 'prophylaxis' raac shuruucda wareegga dalagga, jeermiska maadada beerto (biyo kulul ama saline). Isku duubo calendula ama marigold inta u dhaxeysa saf oo basasha. Faleebo marigolds ah ayaa la nadiifin karaa nalalka si ay uga cabsoodaan dulmiga.
Waa maxay sababta basasha ay u noqdaan huruud ah, daaweynta cudurrada
Marka lagu daro guuldarada nalalka by cayayaanka - dulin, geedka burburin karaa cudurka. Sababtoo ah waa maxay jahwareerka iyo qallajinta ama qallajinta basasha, cudurada ay waxyeelo u geystaan, iyo sida loola macaamilo, waxaan sii fiirin doonnaa dheeraad ah.
Wakiilka keena infekshanka waa basasha, jiilaalka nalalka kale. Basasha cudurka qaba ma kala duwanaan karaan kuwa ka caafimaad qaba, sidaa daraadeed way adagtahay in la ogaado cudurka sida ugu dhakhsaha badan.
Ka dib markii la beero, dhirta bukaanku waxay kobcaan kuna koraan illaa bil gudaheed dhibaato la'aan, laakiin marka caleemuhu waxay noqdaan jaalle oo engegaan. On dusha sare ee taarikada xaashida waxaa lagu arki karaa scurry, u muuqda in ay wasakh.
Caabuqa waxaa loo kala qaadaa tijaabada caafimaadka leh hawada iyo xilliga roobka. Maadaama ay qoyaan iyo kuleylku yihiin xaalado wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta fungus, marka kaydinta basasha, la soco heerkulka iyo hawo qalaji.
Tallaabooyinka ka hortaga: ilaalinta dalagga beeraha, beerashada hore, ka hortaga digada inta lagu jiro bacrimin, isticmaalka dharka leh nitrogen iyo superphosphate; ka hor intaan laga beeri, daaweynta geedo by kuleylka ilaa 8 saacadood at 40 ° C.
Waxaad la dagaalami kartaa fungus adiga oo ku buufin kara "Fitosporin" ama "Phyto-plus". Tani waa xulashada ugu wanaagsan: ka dib marka basasha la baari karo waa la cuni karaa 2 maalmood.
Anthracnose on caleemo Waxaa lagu muujiyey dhibco cagaaran iyo wareegyo. Caleemuhu waxay bedelaan midab, deforme iyo qalalan. Sidee loo maareyn karaa basasha si aysan u noqon jaale ama booli? Dhirta waxaa lagu buufin karaa xeryahooda soo socda: sulfate copper, isku darka Bordeaux ama chlorine bakır.
Fungus waxay ku degtaa meelo dildillaacan iyo geedo waaweyn. Geedo khafiif ah, dhirta sariiro qorraxdu furan oo ka saar goosashada ka dib. Cudurku wuxuu ku faafaa haraaga geedaha ama abuurkooda.
Digniin! Ka dib markii la marsiiyo xalalka naxaasta ku jira oo aan la cuni karin basasha mudo ah 3 toddobaad.
Haddii caleemaha caleemaha leh caleemo huruud ah ayaa u muuqda caleemaha - tani waa chalcosporosis. Caabuqa cudurkan wuxuu ku badan yahay dhirta aan caddeeyn iyo abuurkooda. Guga, leh beeritaanka cusub, fungus waxaa loo gudbiyaa geedo by hawada ama by raindrops. Ha ilaawin inaad si fiican u nadiifiso ciidda ka dib goosashada. Si loola dagaallamo fangasku wuxuu ka caawinayaa daroogada: "Fitosporin" ama "Fito-plus".
Cudurrada caadiga ah ee la socota basasha - qoorta qoorta. Waa suurtagal in loola dagaallamo, maxaa yeelay marka ay ku dhacdo qoorta baska oo furan, roodhida basasha. Cudurkan waxaa lagu muujiyaa inta lagu jiro kaydinta dalagga. Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in xagaaga roobab, basasha waa in si wanaagsan loo qalajiyey kahor intaan la goynin meel kaydinaysa.
Ma taqaanaa? Qoraalka ugu horreeya ee basasha ayaa laga helayaa Kitaabka Qudduuska ah. Marka lagu tilmaamo dhamaan reer binu Israa'iil ee addoonsiga, waxaa lagu sheegay in ay cuneen basasha. Giriiggii qadiimiga ahaa waxay qiimeeyeen basasha si loogu bogsiiyo guryaha, laakiin waxa loo tixgeliyaa cuntada saboolka.
Marar badan, talooyinka basasha waxay noqdaan huruud, sababta ay tani u dhacdo - waxaan tixgelineynaa dheeraad ah.
Cudurrada caadiga ah ee dhammaan noocyada basasha - Donets kallana. Waxay u keentaa guluubka inta lagu guda jiro horumarinta, halka basasha ay ku dhacaan baalasha basasha, oo huruud noqda oo qallalan. Waxa ugu xun ayaa ah in cudurkaan laga hortagi karo oo keliya.
Si taxaddar leh u dooro meel loo dego: waa inaysan jiri lahayn qoyaan taagan. Haddii aad ku aragto cudurka, basashaada ku samee boggan halkan ka hor 5 sano kadib.
Ka hor inta beerto, jeermi geedo, iyo horey ugu wanaagsan ee basasha yihiin dalagyo. Si habboon u kaydi dalagga, ha dayicin ilaalinta heerkulka, qoyaanka iyo hawo-qaadashada.
Daryeelka aan haboonayn ee basasha - mid ka mid ah sababaha huruuda
Cudurada badan ee dhirta waxay u muuqdaan inay ka dhalanayaan waxyaabo aan caadi ahayn oo ay ka mid yihiin caadooyinka daryeelka, iyaga oo gaabinaya xilliga goosashada iyo dayacaadda hababka lagu nadiifinayo dhismaha si loogu keydiyo dalagyada beerta.
Biyaha aan ku filneyn ama aan habooneyn
First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa iyo inta jeer ee ay biyaha ku ridaan basasha si aysan u noqon jaale. Biyaha basasha marka ay qaadato xididka, waxaad u baahan tahay 3 cisho, oo aad u badan, biyo kulul leh heerkul ah +18 - +25 digrii.
Waxaa habboon in la sameeyo waraabinta subixii. Haddii aad isticmaashay mulch, biyo yar ayaa yar. Biyaha adag waa in la jilciyaa. Waraabin dheeraad ah ayaa la dhimi doonaa toddobaadkii hal mar, bisha July - hal mar toddobaadkii iyo badh. Xaaladda ugu weyni maaha in la buuxiyo oo aan la qalajin, waa inay jirtaa meel dhexe.
Ma aha su "aal muhiim ah: sida loo quudiyo basasha si aaney u noqon jaalaha. Cunto waa in lagu daraa waraabinta.
Bacriminta waxaa lagu kala diraa biyaha waraabinta: 10 g oo biyo ah 50 g oo amooniyam ah, 20 g of superphosphate iyo cusbo potassium.
Quudinta koowaad waxaa la sameeyaa marka baaluqu muujiyey 3 cm oo cagaaran. Xiga - toddobaadkii. Dhowr maalmood ka hor goosashada, quudinta ayaa la joojinayaa.
Xiiso leh In ka badan 2000 sano BC. er Waddada Waddada Weyn, caravans leh alaabo kala duwan, oo ay ku jiraan basasha, horey u baxeen. Qoraaga buuggan "Gourmets from the Silk Road" Laura Kelly ayaa halis gelisay cunto "Mesopotamian Game Pie", mid ka mid ah maadooyinka ay basasha ahaayeen. Ayadoo la eegayo faallooyinka Mrs. Kelly, saxaabigii Baabiliya wuxuu u yimid dhadhankiisa.
Hirgelinta talooyinkan: sida loo kaydiyo basasha; waxa la quudiyo si aan u dhaawacmin; haddii basasha uu huruud noqdo, marka loo eego biyaha iyo talooyinka kale ee qiimaha leh, dabeecadda way iska dhaafi kartaa. Xilli aad u qallalan ama qoyan oo qoyan oo qoyan, wuxuu keenayaa hurdi, qiiq, wax kasta oo aad sameyso. Wixii sariirta basasha si ay ugu raaxaystaan ​​goosashada caafimaad leh, waxaa ugu wanaagsan haddii ay ku daboolan yihiin koriyo ah.